Xaawo - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Xaawa)
Xaawo Xaawa (; Af-Hebrow: חַוָּה,; ; Aramiyya: ܐܘܚ; Af-Tigrinya: ሕይዋን ? ama Hiywan) sida ay isla qabaan Diimaha Ibraahimiga ahi (waa diinta Islaamka, diinta Masiixiyada iyo tan Yuhuud) Xaawa waa qoftii dumar ee ugu horeeysay ee Ilaahay (s.w.t) ka abuuray feedha lamaanaheeda Nebi Aadam. Si kale haddii aan u dhigno Xaawo waa hooyodii kowaad ee dhamaan dadka, halka Aadam ka yahay aabaha dhamaan dadka ku nool meeraha dhulka. Sida diinta Islaamku xustey markii Alle abuuray Aadam iyo Xaawo wuxuu ka dhigay seey iyo oori kuwaasi ku dhex nool janada. Wakhti yar ka dib, Sheydaan oo asagu ka xun sharafta iyo maamuuska Ilaahay siiyay Aadam iyo xaaskiisa ayaa wuxuu bilaabay inuu Xaawo shukaamiyo, isla markaana ka dhaadhiciyo in haddii eey cunto midhaha iyo khudaarta geedka laga mamnuucay ay noqonayso qof aad u qurux badan oo waligeed noolaanaysa, marnaba aanan dhimanaynin, isla markaana yeelanaysa mid la mid ah awood weyn ee Rabbi (s.w.t).
Si kastaba ha ahaatee, Xaawo waxay qaadatay sheekadii beenta ahayd ee Ibliis taasi oo burinaysa ama lid ku ah oo ka soo horjeeda amarkii Ilaahay siiyay qoyskan ugubka ah oo ahayd ineey wax kasta cunaan laakiin aanay marnaba taabanin ama u dhowaanin midhaha geeka laga mamnuucay. Waxayna odaygeedii Aadam ku kaliftey ineey labadooduba cunaan midhaha iyo khudaarta geedka laga mamnuucay. Isla markiiba waxaa isku muuqatay ceebtoodii, markaasaa waxay bilaabeen iney isku qariyaan caleenta iyo laamaha geedaha. Wakhti yar gudaheed Alle wuxuu amar ku bixiyey in labadooduba ay ka baxaan janada ooy nolol cusub ka bilaabaan oogada dhulka.
Beerta Ceeden waxaa loo maleeyaa inay ku taallay meel maanta ah bariga Turki. Runtii, beerta Ceeden adduunka bay ku taallay. Ilaahay Aadan buu abuuray oo wuxuu dejiyay beerta Ceeden “inuu falo oo dhawro.” Kaddib Ilaahay naag buu Aadan u abuuray oo magaceeda Xaawa buu ahaa. Ilaahay iyaga wuu amray oo wuxuu ku yiri: “Wax badan dhala oo tarma, oo dhulka ka buuxsama, oo ka sara mara dhulka.” Way caddahay inuusan Ilaahay “si aan waxba tarayn u uumin [dhulka], laakiinse u uumay in la degganaado.”. Aadan iyo Xaawa haddii aysan dembaabi lahayn weligood bay noolaan kareen. Ilaahay Aadan iyo Xaawa Jannadii wuu ka eryay. Si adag bay u hawshoodeen siday dhulka beerta Ceeden ka baxsan wax ay cunaan uga beertaan. Waqti kaddib Xaawa way uuraysatay oo waxay dhashay cunuggoodii ugu horreeyay Qaabiil. Aadan iyo Xaawa waxay dhaleen wiilal iyo gabdho kale oo ay ka mid ahaayeen Haabiil iyo Seed oo ahaa Nuux awowgiis.
Muxuu Ilaahay Silica u Banneeyaa?
↑ Jannadii Way Luntay
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xaawo&oldid=217728"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 29 Sebteembar 2021, marka ee eheed 15:52.